Ubhontshisi omhlophe ofudumele, amazambane nesaladi | Ukupheka Kwekhishi
Ubhontshisi omhlophe ofudumele, amazambane nesaladi
Ihlobo seliphelile ngokusemthethweni. Amazinga okushisa ale mpelasonto kanye nemvula engapheli nawo enza kucace kithi. Ngale panorama, siqala ukufisa izitsha ezishisayo nezinamandla kunalezo ezibe nenkanyezi etafuleni lethu ehlobo. Futhi lokhu isaladi elifudumele lobhontshisi omhlophe, amazambane nesanqante kubonakala kufanelekile kulolu shintsho.
Amasaladi we-legume abukeka njengenye indlela emnandi yokufaka leli qembu lokudla ekudleni kwethu. Uma sisebenzisa, njengakulokhu, imifino ephekwe ekheniwe ilungiswa ngokushesha okukhulu. Singayichaza ngokuthi ukudla okusheshayo, kepha futhi kunempilo.
Njengoba upheka amazambane, izaqathe neminye imifino kuvamile ekhaya. Kubonakala sengathi kuyinsiza enkulu yokwazi ukulungiselela ukudla noma isidlo sakusihlwa kusukela ekuqaleni. Esifana naleso esisiphakamisa namhlanje nokuthi sisebenze ngokufudumele ukumelana namazinga okushisa aphansi ngaphandle (15ºC). Ngabe unesibindi sokukulungiselela?
Le bhontshisi emhlophe efudumele, amazambane kanye nesaladi isaladi kuyindlela enhle ngalesi sikhathi sonyaka njengesidlo sasemini noma isidlo sakusihlwa.
Imbiza engu-1 (570g) kabhontshisi ophekiwe
1 ikani le-tuna yemvelo
Epanini elinamanzi sipheka amazambane kuze kube yithenda.
Kwesinye, senza okufanayo ngezinqathe ezihlutshiwe.
Okwamanje, silahla okuqukethwe kwefayela le- imbiza kabhontshisi ngaphezulu kwe-colander bese ugeza ngaphansi kwamanzi abandayo ukuze ususe usawoti omningi. Uma sesikhishiwe, siwafaka endishini noma esitsheni sesaladi.
Ngemuva kwalokho engeza i-tuna evulekile futhi siyaxuba.
Lapho kuphekwe amazambane kanye nezaqathe, usike izaqathe zibe yimichilo bese uxebula bese sisika izingcezu amazambane ukuwafaka esaladini.
Sisela ngamanzi nge ugcobho lwamafutha omnqumo, isizini, engeza i-paprika encane bese uxuba.
Siphaka ubhontshisi omhlophe ofudumele, amazambane nesaladi.
Indlela ephelele ye-athikili: Inicio » General » Ubhontshisi omhlophe ofudumele, amazambane nesaladi